Qalab qofka lixaadka waxkaqaba ka caawinaya socodka oo lasoo saaray (Sawirro) - Aayaha
Home ARIMAHA BULSHADA Qalab qofka lixaadka waxkaqaba ka caawinaya socodka oo lasoo saaray (Sawirro)
Warbiixn ay soo saareen khubaro dalka Faransiiska ka soo jeedda ayaa sheegay nin aan muddo laba sana ah soconin ayaa socodka ku guuleystay kaddib marki teknooloojiyad cusub ee exoskelton oo socodka ka saacido loo sameeyey.
Thibault oo 30 jir ah ayaa marki ugu horreysay socoday isaga oo dareemay “sida qofki ugu horreeyey oo dayaxa dushiisa ku socday”.
Waxayna saynisyahannadu sheegeen in socodkiisa ugu horreeyey uu ku sameeyey shey baarka qalabkaasi lagu sameeyey dhexdiisa.
Balse khubaradu waxay sheegen iney arrintani ku imanin wakhti yar oo uu ahaa tijaaba iyo isku day in mudda ah soo socday.
Qalabkaasi siduu u shaqeeyaa?
Thibault waxaa madaxa looga sameeyey laba qalliin waxaana dhinacyada maskaxda la geliey aalad qalbka socodka ka caawinayo uu ku amro uuna la shaqeeyo.
64-ka qaybood uu qalabkaasi ka kooban yahay wuxuu la shaqeeynayaa maskaxda wuxuuna qalabkaasi uu la shaqeeynayaa aalladda Koombiyuutarka.
Barnaamijka Koombiyuutarka oo ah mid ay tayadiisa iyo awooddiisuba sarreyso xogta soo gaadho wuxuu u baddalayaa amar uu qalabka qofka loo xiro uu qaato uuna ku shaqeeyo.
Thibault oo loo xirayo qalabka socodka ka caawinayo ee exoskelton.
Marka uu damco inuu socdo wuxuu qalabka uu ku amrayaa socod sidaa ayey labadiisa lugoodna socodka ku billaabayaan.
Gacmihiisuna waa uu hagi karaa balse qalabku seddex qaybood ayuu ku shaqeeynayaa.
Thibault oo aan dooneyn magaciisa oo dhammeystiran ayaa lixaadka ka naafoobay kaddib marki uu ka soo dhacay masrax dhererkiisu ahaa 15 miitir ah oo ku yaallo goob lagu caweeyo habeenkii.
Dhaawaca dhabarka ka soo gaaray ayaa sababay inuu jirkiisa oo dhan dhaqdhaqaaqa gabo, muddo laba sana ahna wuxuu yaallay isbitaal oo xaaladdiisa caafimaad lagula soconayey.
Balse 2017-kii wuxuu ka mid noqday daraasadda lagu sameeynayey qalabkan exoskeleton oo ay si wada jir ah u wadeen Clinatec iyo Jaamacadda Grenoble.
Tijaabooyin iyo marxalado badan oo u qalabkaasi sameyntiisa soo marayna waxaa lagu tijaabin jiray Thibault, ilaa ugu dambeynti qalabki lagu guuleysto.
“Socodkeyga waxaa la mid ah sida qofki ugu horreeyey oo dayaxa ku dul socday. Muddo laba sana ah maanan socon, xataa waxaan illaaway inaan ahay qof ka dheer dadka qolka aan kuwada sugannahay,” ayuu yiri Thibault.
Sida uu qalabkan exoskeleton u wanaagsan yahay?
Qalabkan miisaankiisu waa 65 kiilo wuxuuna shabbahaa mashiinta rooboot balse adeegga uu bixiyaa waa uu kaduwan yahay.
Wuxuuna qalabkan uu awood u leeyahay inuu qaato amar kasta oo la siiyo sida uu yahayna uu u fuliyo.
“Socodkan waa uu ka duwan yahay socodka caadiga,” ayuu yiri Barafasor Alim-Louis Benabid, madaxa guddiga Clinatec oo BBc News u warramay.
“Cid dunidan ku nool oo sameyn karta socodka caadiga ah mid la mid ah ma jirto” ayuu na sii raaciyey.
Thibault qalabkan marka lagu xiray wuxuu awooday inuu gacmihiisa kor iyo hoos uu siduu rabo ugu dhadhaqaajiyo dhaqdhaqaaqna uu sameeyo, tijaabada Thibault lagu sameeyeyna 71% waa lagu guuleystay.
saaynisyahannada faransiiska waxay sheegeen iney sii wadayaan dadaalkooda si ay qalabkaasi ay u sii casriyeeyaan waxbadanna ugu kordhiyaan.
Waxayna sheegeen iney doonayaan iney soo kordhiyaan xawaaraha qalabkaasi uu ku qaadanayo amarka maskaxda uga maro.
Welina waxaa jira howla u baahan in waxbadan laga qabto waxna lagu soo kordhiyo ayey yirahdeen Saynisyahannadu.
Iyaga oo sheegay iney qorsheeynayaan iney qalabkaasi fara uu qofka waxa uu doono uu ku qabsan karo ay ku biiriyaan.
Barafasro Tom Shakespare oo ka socda dugsiga nadaafadda iyo caafimaadka ee London wuxuu sheegay: “Daraasaddan cusub iney mudan tahay in aad loo bogaadiyo qalabkuna uu yahay qalabka kuwi hore aad ugu duwan, marka waxa harsan ayaa waxay tahay in qalabkaasi la casriyeeyo lana gaarsiiyo heer ay dadka u baahan ay si fudud ugu isticmaali karaa.
15% dadka lixaadka wax ka qaba ayaa isticmaala kursiga ay dadka naafada ah adeegsadaan iyo qalab kale oo la mid ah.
Xogta qalabkan exoskeleton waxaa lagu soo daabacay wargeyska Lancet Nerology oo ka faallooda daraasadaadka cusub ee caafimaadka la xiriira oo ka soo baxa dalka dalka faransiiska.
Previous article3 Waxyaabood Oo La Sameeyo Markii Aadan Jecleyn Saaxiibada Lamaanahaaga
Next articleShan Waxyaabood Oo Dhaca Markaad Dhaqmada Ka Joojiso Timahaaga
Revealed: Common food women like eating that expose them to risk...
UGAAR AH DUMARKA: 16 Calaamadood Oo Aad Ku Garan Karto Ninka...